🥇 ▷ AMD waxay ku horumartay hormarinta Navi GPU cusub oo taageero Raadinta Raadinta ah ✅
AMD waxay ku horumartay hormarinta Navi GPU cusub oo taageero Raadinta Raadinta ah
In dagaalka loogu jiro kaararka garaafyada, xaaladda suuqa ay la Nvidia si fiican loo yaqaan, xukuma in garoonka ugu sareeya, gaar ahaan ay kala duwan RTX oo leh Raadinta Ray. Teknolojiyadda raadinta raajada ayaa ah mid ka mid ah teknolojiyadda aadka looga filayo mustaqbalka jiilka soosocda, natiijadeeduna ma yara. AMD waxay balan qaaday inay mustaqbalka gaarsiin doonto tikniyoolajiyaddan, oo tilmaamaya consoles-yada, laakiin ilaa iyo hadda uma muuqan inay wax tilmaan ah ka bixisay hanashada. Macluumaadka cusub ayaa tilmaamaya AMD waxay ku horumartay hormarinta Navi GPU cusub iyada oo taageero laga helayo Ray Tracing.
Gaar ahaan, macluumaad taxane ah ayaa la kashifay kuwaas oo ku fiday sida xanta qaylo-dhaanta ee shabakadda, halkaas oo aan ka hadlayno Navi 23. Maalmo ka hor jiritaanka tiro balaadhan oo ah 7nm oo sameeyayaal ayaa la sifeeyay AMD Navi kuwaas oo laxiriira noocyo kala duwan oo ah noocyo waxqabadka sare, RX58xx, xitaa moodaalo laga soo daayay Radeon RX95xx. Laakiin macluumaadka cusub ee ka soo baxa RedGamingTech, waxaa loola jeedaa qaab cusub oo shaqo oo soosaare ah lagu xusi lahaa Navi 21 iyo Navi 23, kuwa iyagu si toos ah u helay naaneyska “Nvidia Killer.”
Shaandhaynta cusub ee AMD waxay soo bandhigaysaa khadka ‘Xbox Scarlett’
Oo muxuu u faafayaa Nvidia? Runtu way fududahay haddii aan isku dayno inaan fahamno xafiiltanka ka dhexeeya GeForce iyo Radeon sida midka u dhexeeya Xbox iyo Playstation. Run, isku mid maahan, laakiin laga soo bilaabo AMD waxaa muuqata inay jirto rabitaan lagu joojinayo isbahaysiga Nvidia. Iyada oo dib-u-dhac xoogaa ah iyo qaar ka mid ah niyad-jabka aan lagu joogin xafladaha sida E3 2019 si loola xisaabtamo horumarkan, macluumaadkani wuxuu tilmaamayaa AMD haddii ay ku guuleysatay in ay horay uga sii wadato qormadan, iyada oo qaadaysa tallaabo hore loogu qaadayo horumarinnada kuwa sameeya. Navi 23 oo 7nm ah. Kuwani waa kuwa sida tooska ah ula shaqeeya is-waafajinta Raadinta Ray AMD Wuxuu ku hormari lahaa horumarka cusub ee Navi GPU isagoo taageero ka helaya Ray Tracing, laakiin xaqiiqda ayaa ah markii marka laga hadlayo howl wadeyaashaan cusub wuxuu u muuqdaa inuu saxiixay mid aad u sarreeya si uu ugu qalabeeyo qalabka loo yaqaan ‘consoles’.
Waana midda kuhadalidda heerar adag oo heer sare ah, iyo in ka badan oo xagga teknolojiyadda ah oo aan imaan doonin illaa 2020, ka go’naanta sicirka ayaa patent ah. Waana in xogta oo dhami ay muujineysaa in horumarkani uu diiradda saari doono isku day cusub oo lagu doonayo in lagu sii daayo dhamaadka sare ee Nvidia, kadib isku daygii fashilmay. Radeon R9 Fury X, Radeon RX Vega iyo Radeon VII. Hadda, goorta jiidista Nvidia ay ka jawaabi karto sida ay ilaa iyo hadda sameysay, iyo wararka ugu horreeya ee la isla dhexmarayo, ama tilmaamaha, baaxadda ma qaadaneyso in la soo baxo GeForce 30 marka la gaaro 2020. Tani waxay jawaab degdeg ah ka noqon doontaa Nvidia, laakiin kama qayb geli karaan wax walba oo AMD ay diyaarinayso.
Isbarbardhiggu wuxuu muujinayaa Radeon RX 5700XT oo fulinaya heer RTX 2080
Oo haddii AMD ay sameyn karto wax cajiib ah guud ahaan waa meesha, meesha RDNA ay u ahayd mid si wanaagsan kor ugu qaadday waxqabadka guud ahaan, durba ka hadal RDNA 2. Tanna durba waxay u muuqataa inay siineyso macluumaad badan oo ku saabsan isbeddellada kuwa sameeya Navi kuwa leh Navi 21 iyo Navi 23, waxaa sii dheer xoojinta dhinacyo kale oo isku mid ah oo muhiim ah oo la xiriira gudbinta macluumaadka gudaha aaladda.
Howlaha AMD waxay ka gudbaan bixinta natiijooyinka wanaagsan ee suurtagalka aag ama meel kale, halkaas oo ay ku guuleysteen inay muujiyaan isu-dheelitirkii maanta ku soo celiyay inay noqdaan garsoorayaal. Isaga oo tixraacaya in la xisaabtami karo Intel teknoolojiyaddan ugu dambeysay ee CPU, oo leh PCIe 4.0 iyo hadda, oo raadineysa inay si la mid ah Nvidia ku sameyso. Dhanka kale, horumarkan ayaa ujeedadiisu tahay inuu ka faa’ideysto talooyinkan, laakiin u xaadiritaanka SoC Gonzalo iyo SoC Flute, hadda, kama foga inay qayb ka noqdaan seenyadaa. Waan arki doonnaa haddii noocyadaas la dayactiro ama AMD runtii ay u bixi doonto dhammaan hirgelinta Horumarradan waxaa loo qorsheeyay 2020.